Ithimba lase-UKZN linabalingani balo engqungqutheleni e-British Library eLandani.
Abasebenzi base-UKZN bebeyingxenye yohlelo lobuholi i-International Leaders’ Programme yezinsuku ezinhlanu e-United Kingdom.
UMnu Nazim Gani wase-Alan Paton Centre and Struggle Archives; ungoti wezobuchwepheshe, uMnu Bongani Jwara; uMnu Senzo Mkhize wase-Campbell Collections; noMnu Thiru Munsamy wase-Gandhi-Luthuli Documentation Centre bebeye kulolu hlelo olunzulu lokucijwa.
Ngalelo sonto, izithunywa zase-UKZN zahlangana nabalingani bazo bakwezinye izindawo emhlabeni, babhunga ngezinto ezithinta izindlela zokuqoqa nokuphatha ulwazi ezithangamini zokucijana, izibonelo zocwaningo namaqoqo ocwaningo, bathola ulwazi ngaloku okulandelayo:
• Ukuthola ukuthi ongoti abagcina ulwazi e-British Library amaqoqo bawasebenzisa kanjani ukusebenzisana nabacwaningi nomphakathi;
• Ukufunda ukuthi i-British Library iyenza futhi iyiphathe kanjani imisebenzi yokugcina ulwazi ngendlela yobuchwepheshe besimanjemanje;
• Ukunakekela amaqoqo aphatheka ngezandla;
• Ukunakekela amaqoqo obuchwepheshe – ukuwagcina nokuwamisa ngononina;
• Ukuxhumana nabacwaningi ngezindlela ezintsha zokusebenzisana;
• Ukusebenzisa amaqoqo ezinhlelweni zokufunda nemibukiso ukuxhumana nabantu abehlukene.
Leli thimba libonge abaphathi bomtapo wolwazi wase-UKZN ngalolu hambo elifunde okuningi kulona.
*Kafushane nge-British Library:
I-British Library igcine amanye amaqoqo amakhulukazi emhlabeni abalelwa ezigidini ezingama-160. Nakuba okuningi eqoqweni kuyizincwadi namaphepha, kodwa futhi eqoqweni kukhona izinto ezehlukene kwenye inkathi eziningi. Kwezinye izinto ezikhona, kukhona izikhumba, izindwangu, imidwebo, okwenziwe ngobumba, izinsimbi ezehlukene, amatshe ayigugu, ifenisha, okubaziwe, ocwazi, amazinyo endlovu, amathambo, nezithombe. Lo mtapo unezinjongo ezimbili zokugcina amagugu nokuthi abawadingayo bakwazi ukuwasebenzisa. Ithimba lakhona, elibalelwa kongoti abangama-55, liklama inqubomgomo, libheke izimo zokuqoqa, bese lenza umsebenzi wokugcina amagugu esesimweni ukuze asebenziseke ngezindlela ezehlukene.